Ugaar ah Ragga: Jimicsiga Qaadista Biraha Culus oo Ragga ka difaaca Cudur halis ah ” daraasad” | Calafka.net	Friday, April 18th, 2014	Home
Ugaar ah Ragga: Jimicsiga Qaadista Biraha Culus oo Ragga ka difaaca Cudur halis ah ” daraasad”
Aug 8, 2012 - 5 Jawaabood	ShareSaynisyahanno u dhashay dalka Maraykanka, ayaa baaritaan ay sameeyeen ku ogaadan in ragga 34% jimicsiga qaadista walxaha culus ka badbaadiyaan macaanka.
Khubaradan waxay sheegeen in tababarka qaadista walxaha culus ee joogtada ah uu hoos-u-dhigo fursadii uu qofku ku qaadi lahaa cudurka macaanka, iyagoo xusay in oradka iyo tallaabo dheeraynta joogtada ah sidoo kale faa?iidooyin caafimaad leeyihiin.
Culimadan waxay daraasadooda ku falanqeeyey 32,000 qof oo Maraykan, kuwaasoo ka qaybqaatay cilmi-baadhis caafimaad oo lagu eegaayey hab nololeedka qofku sida uu u saameeyo caafimaadkiisa.
Intii lagu guda jiray cilmi-baadhista oo bilaabantay 1990 ilaa 2008 guud ahaan 2,278 qof oo ka qaybgalayaasha ah ayuu ku dhacay macaanka loo yaqaan 2 Diabetes.
Mr. Anders Grantved oo khubaradan hoggaaminaayey, kana tirsan jaamacada Southern Denmark iyo Jaamacada Harvard ee dalka Maraykanka, ayaa isagoo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi; ?Ilaa iminka daraasadihii hore waxay noo sheegayaan in jimicsiga joogtada ah uu muhiim u yahay ka hortaga macaanka, gaar ahaan qaybta 2, laakiin dad badan ayey ku adag tahay inay jimicsigan adag sameeyaan.
Natiijada cusub ee daraasadan ka soo baxday waxay soo bandhigtay in jimicsiga qaadista walxaha culus culus ay ragga ka badbaadiso macaanka.?
Dadka ka qaybgalay cilmi-baadhistan ayaa loo kala qaybiyey inay jimicsi sameeyaan, isla markaana qadaan biracaha culus ee jimicsiga loogu talagalay 59, 60 ilaa 150 daqiiqo muddo toddobaad ah.
Waxaana halkaas ka soo baxday in raggii 150 daqiiqo toddoobaadkiiba qaaday biriaha jimicsiga in fursaday ku qaadi lahaayeen macaanka 34% hoos-u-dhacday.
Wariye Ibraahin Khadar Siciid
cilmi cawil goor says:	August 8, 2012 at 9:30 pm	Waa dhab arintaas
Reply »	Cabdi lahi cali maxamad says:	August 9, 2012 at 9:49 am	Waxandihi laha wafigir adufican waxana laga hela cafimad ilahay aya cafimad bixiya lakin waxa laga qada dhabar xanun
Reply »	mass says:	August 10, 2012 at 7:03 am	asc ugu horeyn marka xiga waa cafimad aad u ficn ragana wax tar u leh dhabar xanunka waxa kena wax xun qadista weightka aad qaadeyso waa inuu yahay mid aad ka adagtahy ilen wad gare midka culus iyo ined si xun usameyso effect ayey ledahy.
Reply »	careys says:	September 29, 2012 at 2:57 pm	asc waa wax loo bahanyahay in qof kasta uu kaa fakaro cafimadkisa sii uu ugu nolado cafimad aniga aada ayaan uu jeclahaay qadista gym ka kakakak
Reply »	muhanad ismaa says:	August 5, 2013 at 5:41 pm	asc waa muhanad oo jooga uae waa arin caafimaad lah qadista walxaha culus